Nnwom 80:8-19 NA-TWI | Biblica
Nnwom 80:8-19 NA-TWI
Wode bobe fi Misraim bae. Wopamoo aman foforo bi fii hɔ na wuduaa wɔ wɔn asase so. Wusiesiee baabi sɛnea ebenyin. Ne ntini no kɔɔ asase mu na ɛtrɛtrɛw asase no so nyinaa. Ɛde ne nhwini kata nkoko so na n’abaa no kata sida nnua so. N’abaa dennanee koduu ɛpo so kɔe ara koduu asu Efrata so. Adɛn nti na wubuu ban a atwa ho ahyia no? Mprempren, obiara a ɔbɛfa hɔ no betumi awia n’aba no bi; na kɔkɔte tiatia so na wuram mmom awe.
Otumfoɔ Nyankopɔn, dan w’ani hwɛ yɛn. Hwɛ yɛn fi soro hɔ; bra na begye wo nkurɔfo nkwa! Begye bobe a wuduae na nkwa; saa bobe ketewa a woma enyin ahoɔden so no! Yɛn atamfo ato mu gya atwa akyene; fa w’abufuw hwɛ wɔn na sɛe wɔn. Hwɛ nnipa a woayi wɔn no so na bɔ wɔn ho ban; ɔman a wugyinaa no ahoɔden so no. Yɛrennan yɛn ho mfi wo ho bio. Ma yɛn nkwa na yɛbɛkamfo wo.
Otumfoɔ Awurade Nyankopɔn, san fa yɛn bra. Hu yɛn mmɔbɔ na wobegye yɛn nkwa.
Read More of Nnwom 80